Top European Train Tours You Shouldn't Miss | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Top European zemininingwane Tours uwageje
(Kugcine ukubuyekezwa On: 05/03/2021)
Okuhambayo kuphi uhlale emangalisayo futhi senza ukuthi lithole lamadolobha amahle, umlando izwe noma abanamasiko nezinkambiso ezihlukahlukene kweyethu. Nokho, ungenayo ukuya kude nasekhaya ukuze bathole izindawo ezinhle. Kunezindlela ezimbalwa European isitimela izinkambo nge charm esiyingqayizivele ngokungangabazeki ukuthi bafanelwe indawo uhlu isihambi yethu isifiso. Kusukela ebukekayo amadolobha aseYurophu izihloko nge imilando ocebile namathonya kwamasiko, kuthathe isikhathi ukuthola imizi ukuvakashela.
Lesi sihloko sabhalwa sokuba umuntu afunde izindlela zemininingwane Ukuvakasha esenziwa Gcina Isitimela I Eshibhe zemininingwane Amathikithi Iwebhusayithi In The World.
Nazi ezinye European isitimela izinkambo uwageje:
Siya ezweni kancane ukufudumala, ngokuqondile, nesifunda elihle Country Basque. Lapha sithola ukuthi inhlokodolobha yesibili YaseYurophu isiko ubekade 2016: San Sebastian. Lo muzi enhle etholakala esogwini olusenyakatho njalo temabhodlela amashadi emhlabeni zayo sipho ukudla futhi yayo nightlife ephapheme. Ngokolunye uhlangothi, surfing, amaqembu kanye esimweni esikhululekile ziyinto uyoba ukuthandana nalo. Kuyinto evamile thola imicimbi ubuciko mayelana, umculo, futhi ukudansa kuwo wonke amagumbi edolobheni. Ngakho-ke, it is one of the greatest in Spain futhi ingxenye yethu European isitimela izinkambo ukuvakashela futhi bachitha usuku lonke ukuthola izindawo zalo engcono ukuqedela kusihlwa nge dinner esiphundu futhi cocktail ngasolwandle.
Enhliziyweni Germany, cishe ihora kusukela Berlin, kukhona kwelinye idolobha uwageje. Leipzig uya abasafufusa njengoba okunye esimanjemanje kakhulu futhi iphila enhlokodolobha. Mhlawumbe kungenxa yayo umlando elikhazimulayo, exhumene namagama afana Bach noWagner; noma, mhlawumbe, ngoba izikhala zalo ezinkulu eziluhlaza, okwamanje eyanqotshwa izandla zokucabangela. Kungenzeka futhi umphefumulo walo ethule, lapho art nomculo iyamangalisa. Ngokwazi okukhazimulayo European isitimela izinkambo uhambe, lena ngempela ke.
Bremen ukuze Leipzig Izitimela
Berlin ukuze Leipzig Izitimela
Hanover ukuze Leipzig Izitimela
EHamburg Leipzig Izitimela
I West Rhine sesitimela European zemininingwane Tours, Germany
Ukuze wonke umuntu othanda aluhlaza, Knockout ubuhle, izinqaba, nokushona kwelanga igeziwe izivini, lokhu elula ebabazekayo kanye eMfuleni iRhine yilapho okufanele uhambe ngayo. I ride isitimela phakathi amadolobha German Cologne futhi Mainz ingenye uzoba ukukhumbula kuze kube phakade naphakade. Its namathafa isithombe-ephelele ngeke ngikushiye Breathless! romantics Iqiniso abakholelwa eziphethweni ezijabulisayo futhi magic Fairytale ngeke simdumise izinqaba ebukekayo livela kumabhilidi izivini oluhlaza. I West Rhine ujantshi waziwa emhlabeni wonke njengengxenye "zothando Rhine" uhambo, ngakho uma uthola umuntu omthandayo ukuletha kanye, ukwenza kanjalo. Uzoba isikhathi ongenakulibaleka, ngokufana nabanye abaningi abenze ujantshi waseWest Rhine waba yingxenye yohambo lwabo lwesitimela lwaseYurophu.
ILyon enhle idolobha lesithathu ngobukhulu e France futhi isikhungo kweqiniso ashukumisayo yezwe. Impela a ezikulungele ukuhlala kuzona kakhulu futhi ekhululekile lapho uya khona inhloko-dolobha, zokuzijabulisa kuwo wonke amagumbi. Lyon has konke: iminyuziyamu, zokudla, boutiques, nezitolo yasekuqaleni, kanye Inani elikhulu imigoqo kanye amakilabhu. Libuye inyuvesi ukhombise impilo idolobha, kahle kuwufanele ukuvakashelwa ku European isitimela izinkambo yakho. izakhiwo amahle ebheke eMfuleni Rhone, elikhulu amapaki, futhi isimo ukuziqhayisa amathonya ahlukahlukene French kwamasiko - yini singayithandi?
Brussels ukuze Lyon Izitimela
IMarseilles eya eLyon Highspeed Sitimela
I-Amsterdam eya eLyon Highspeed Sitimela
Ayikho isitimela izinkambo European ziphelele ngaphandle ogibela adabule namathafa olunothile Tuscany. Le ndawo ye-Italy izipesheli zokungcebeleka obumangalisayo futhi inikeza abaningana amaphuzu ezithakazelisayo omthemba kumele uvakashele. Kusukela yisakhiwo sodumo kakhulu Renaissance ubuciko Michelangelo futhi Botticelli ukuze imisebenzi Mother Nature sika ezinhle kakhulu Apennines, Tuscany awuve umuhle. A kahle kuhlelwe isitimela uhambo kungathatha wena ngasogwini Tyrrhenian Sea, noma ake ubona ezivinini odumile wase- Chianti.
EMilan Chianti Castellina Izitimela
Florence ukuze Chianti Castellina Izitimela
Naples ukuze Chianti Castellina Izitimela
ERoma Chianti Castellina Izitimela
Londoloza Isitimela kukusiza ukubhuka isitimela eya endaweni oya kuyo 3 amaminithi, at the rates eshibhe futhi ethathelwa izimali yokubhuka obnoxious!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-european-train-tours%2F%3Flang%3Dzu - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml futhi ungakwazi ukushintsha / ru ukuba / de noma / futhi ngezilimi ezingaphezu.
#travelfrance #uhambo lokuhamba Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi travelgermany travelitaly
Qeqesha Ukuhamba EBelgium, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Czech Republic, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Holland, Qeqesha Ukuhamba Italy, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Izikhangibavakashi Europe
5 Kuhle Amadolobha Ukuze Vakashela Ukuze Thanksgiving EYurophu
Qeqesha Ukuhamba EBelgium, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhambela ENorway, Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland, Qeqesha Ukuvakasha UK, Izikhangibavakashi Europe
Kakhulu-Scenic zemininingwane Uhambo in Switzerland Ngo Summer